Mayelana NATHI - I-AOLGA INDUSTRY LIMITED
Ngokuncika eHong Kong futhi ezinze eShenzhen, i-Aolga ibilokhu ibambelela kumqondo webhizinisi wokuba nobuchwepheshe, osebenzayo, ozinzile futhi onokwethenjelwa obhekene nezwe selokhu wasungulwa. Ngenhloso yokwakha umkhiqizo osezingeni lomhlaba wemikhiqizo kagesi ephephile nethembekile esezingeni eliphakeme, i-Aolga inikeza amakhasimende ethu ngezinto ezijabulisayo nezisezingeni eliphakeme zokungenisa izihambi ngokuhlanganiswa kwe-R & D, ukukhiqiza nokuthengisa.
I-AOLGA igxile ezintweni ezisetshenziswa ehhotela futhi inikezela ngemikhiqizo ephephile, ethembekile nekhwalithi ephezulu yamahhotela emhlabeni jikelele ngokuya ngezidingo zawo nezici zawo, kanti ububanzi bomkhiqizo bungumshini wokomisa izinwele, iketela likagesi, umshini wekhofi, insimbi, isikali sikagesi neminye imikhiqizo kagesi negumbi izimpahla.
Ukunikeza ukusekelwa okukhulu kakhulu nensizakalo ezinikele ngemuva kokuthengisa, i-Aolga inikeza izixazululo kokuphakelwa kwamakamelo nezinsizakalo ezibalulekile kumakhasimende ngokuya ngezidingo zawo zangempela.
Njengoba izinhlelo ze-CRM ne-ERP zihlome kahle, singalusebenzisa kalula lonke ulwazi nezinsiza ezidingekayo ukuphatha imikhiqizo kuyo yonke inqubo futhi sinikeze ngezinsizakalo zangaphambi kokudayiswa nangemva kokuthengiswa kwamakhasimende ethu, futhi siqiniseke ukuthi ngamunye imikhiqizo ingalandelwa emuva ekukhethweni kwempahla eluhlaza, ukukhiqizwa, ezokuthutha namanye amarekhodi kalula, okusilethela ukusebenza kahle kakhulu nokweneliseka okungcono kwamakhasimende.